Sheekooyinka Ciyaaraha Carruurnimada Aasiya iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold
Home Sheekooyinka Kubadda Cagta ee Aasiya
Ciyaartoyda Xirfadleyda Aasiya waxay dhamaantood heleen sheekooyinka Carruurnimada. LifeBogger wuxuu kuu sheegayaa sheekooyinkan, oo leh waqtiyo aad u badan oo aan la ilaawi karin oo labadaba xiiso iyo taabasho ah.
Waa maxay sababta sheekooyinka carruurnimada ee ciyaartooyda Asia?
Dhawaan, qiyaastii 2016, waxaan aragnay farqiga aqoonta oo ballaaran oo ka jira websaydhka. Waa midda laxiriira maqnaashaha oo aan kaheleynin ciyaartoy kubbada cagta Aasiya.
Si loo soo afjaro farqiga noocan ah, LifeBogger wuxuu go’aansaday inuu aasaaso qeybta Aasiya, iyadoo loo arko soo gudbinta sheekooyinka Carruurnimada iyo Xaqiiqooyinka Taariikh nololeed ee Ciyaartoyda Kubadda Cagta.
Ku Saabsan Agabkeena Kubadda Cagta Aasiya
Maqaallada LifeBogger waxay ku hayaan hanaan macquul ah dhammaan sheekooyinkeeda. Qodobbada soo socda ayaa kaa dhigaya inaad faham fiican ka hesho waxyaabaha Aasiyaanka ah.
Marka ugu horeysa, waxaan kuugu soo qaadaneynaa sheekooyinka caruurnimada ee ciyaartooyda Asia, laga bilaabo waqtiga dhalashadooda, iyo waaya-aragnimadooda nololeed ee hore.
Waxaan sidoo kale kuu soo qaadaneynaa macluumaad ku saabsan asalka qoyska iyo asalka / asal ahaan Cayaaryahannada Asia. Sidoo kale, waalidkood (aabeyaal iyo hooyooyinka).
Marka saddexaad, waxaan kuu sheegaynaa waxqabadyadooda Noloshooda Hore iyo khibraddan (wanaag ama xumaan) taas oo ka dhigtay inay ku guuleystaan ​​wicitaankooda kubadeed.
Sheekadu waxay ku sii wadataa dhacdooyin sannadihii ugu horeeyey noloshooda.
Tan xigta waa Wadadayada Sheekada Fanka. Halkan, waxaan sharax ka bixinaynaa waxa ciyaartooyda Asia ay noqdaan kuwa guuleysta.
Sheekadeena Rise to Fame waxay sii sharraxeysaa sheekooyinkooda Guusha iyo heerka ay hadda caan ku yihiin.
Hadana waxaan sii wadaynaa inaan kugu cusboonaysiinno sheekooyinkooda Jacaylka ah (saaxiibbada iyo xaasaskooda).
Marka xigta, waa xaqiiqooyin ku saabsan Nolosha Shaqsiyadeed ee Ciyaartoyda Kubadda Cagta Asia.
Kooxdayadu waxay markaas kugu baraneysaa xubnaha qoysaskooda, iyo sidoo kale xiriirka aad la leedahay xubnaha qoyska iyo ehelkaaga.
Tan ku xigta waa Xaqiiqada Nololeed, Networth iyo Lacag.
Ugu dambeyntiina, waxaan kuu soo qaadanaynaa Xaqiiqooyin aan la aqoonin oo aadan waligaa ka aqoonin kubbadda cagta Asia.
Isku soo wada duuboo, waxaan aaminsanahay Qeybtaan inay ka caawin doonto buundooyinka faallooyinka ee baahida loo qabo in la helo macluumaad ku filan oo ku saabsan cayaartoyda Asia Sheekooyinka Carruurnimada iyo Xaqiiqda Taariikh nololeedka. Waad ku mahadsan tahay, taageerayaasha Kubadda Cagta waxay hadda daawan karaan ciyaarta isla markaana waqti isku mid ah, akhriyaan sheekooyin cajiib ah oo ku saabsan ciyaartoydii ay taageereen.
LifeBogger wuxuu ku dadaalaa saxsanaanta iyo caddaalad-darradiisa joogtada ah ee gaarsiinta qoraallada kubbadda cagta. Fadlan Nala soo xiriir haddii aad aragto wax aan qummanayn midkoodna maqaalkeenna.
Haddaba waxaa halkan imanaya sheekooyinkeenna Kubadda Cagta ee Aasiya.
Tifaftirayaasha LifeBogger - Taariikhda wax laga beddelay: Sebtember 15, 2020
Tifaftirayaasha LifeBogger - Taariikhda wax laga beddelay: Janaayo 24, 2019 0
Tifaftirayaasha LifeBogger - Taariikhda wax laga badalay: July 22, 2018 0
Tifaftirayaasha LifeBogger - Taariikhda la beddelay: Abriil 12, 2020 0
Tifaftirayaasha LifeBogger - Taariikhda wax laga beddelay: Sebtember 23, 2018 0
Tifaftirayaasha LifeBogger - Taariikhda wax laga badalay: July 23, 2018 0
Tifaftirayaasha LifeBogger - Taariikhda wax laga badalay: July 2, 2020 0
Tifaftirayaasha LifeBogger - Taariikhda wax laga beddelay: Diseembar 1, 2019 0
Tifaftirayaasha LifeBogger - Taariikhda wax laga beddelay: Diseembar 18, 2017 0
Tifaftirayaasha LifeBogger - Taariikhda wax laga beddelay: Diseembar 18, 2017 2